Ndakangomuti ndirikuda kuiswawo ndawona kukura kwechombo chake! - Nhau Dzevakuru
Ini ndinonzi Blessing, ndiri mutsvuku and ndinemalips mahombe zvekuti ukaaona unotoona kuti akafitwa nekudya mboro. Handina kunyanya kunaka asi ndakanaka zvangu zvekuti varume ndinowana pandadira, kungoyenda kuClub handishaye anonyenga.
Ndakaroorwa naVictor tine vana vaviri, plus kasex life kedu haina hayo kushata, murume wangu anogonawo hake kusvira zvekuti handingashore.Tine tunhu twedu imba ,mota mbiri mari, zvekuti to be honest handina chandoshaya, zvekuti pfunga yekuita chikomba haina kumbobvira yauya mupfungwa dzangu ever since.
Nyaya yakatangira patakaita party kubasa yekupera kwegore, kubasa kwedu, tainge takawanda ini nemaworkmates angu plus vamwewo vainge vakakokwa, pakafarwa pachidyiwa all sorts of foods, hwahwa uhu, ini hangu ndainwa ma light beers tunana reds utu, asi ndaisada kuita zvekudhakwa ndaizononetsana nemuface kumba. Dzanga zvino dzaakuma past 7 apa ndaakunzwa tudzungu plus ndaakuda kuyenda kumba, ndakati regai ndipinde mutoilet, hameno kuti ndakabhaizika sei ndokupinda mutoilet yevarume.
Ndakatosanodzikisa trouse randainge ndakapfeka ndaakutodhasharara makumbo wanikwe pane murume arikutoita weti, asikana ndakambofreezer brain dzangu nezvandakaona, mboro yandakawona ipapo yakandipa kuti ndifunge kuti murume wangu haana chainacho. Ndakaramba ndakamira ndakangotarisa apa bhurugwa riri mumabvi, murume wuya akacheuka so apa akarisiya richirembera pasi hana yangu yakarohwa nehana masasi kuvhunduka chaiko.
Hameno zvandaida kutaura ndokubva ndati haudi here kundisvirawo nezimboro rako iro I am sure rinonaka, ndakatya nezvandaitaura but as much as ndainge ndadhakwa ndaiziva zvandaitaura. Ndakamuti unogara kupi zvikanzi just next door ndikati rega ndiite weti ndirikuda kumbonzwa zimboro that is kana mukadzi wenyu asipo, akapindura zvikanzi mboro yangu vasikana vakawanda vanonditiza vasati vambouya kumba kwangu. Ndakatanga kuseka ndikati vakarasikirwa inini ndaida zvinhu masasi as much as ndaida murume wangu somehow ane imwe kona yaaitadza kusvika kuti nditunde.
Patakasvika kumba kwake ndainge ndatota kare nekungofunga zimboro iroro richinyura mubeche rangu ha masasi ndainge ndakunonokerwa mhani, akati achingovhura door ndakaita kunge ndasvikirwa ndokubva ndatanga kumuvhura bhurugwa ndokubata zimboro riya nemawoko two, raiyita kurema apa risingakwane kupinda mumuromo apa ndipo pandikatanga kutya manje kuti that’s why vakadzi vaigara vachimutiza. Ndakazongoti haa inini ndirikuda kuti itange yapinda mune rangu beche ko ndainge ninerino zibeche rainge rakafuta kunge chitsuro.
Ndainge ndisingade kutora chance yekukuvadzwa saka ndakarara ndakatarisa mudenga ndokubva ndaita kushadabura kuti munhu apinze mboro yake, akauya zvishoma nezvishoma achiita kakutya. Paakangogumisa musoro wemboro yake ndakafinyamisa kumeso kugadzirira kurwadziwa but to my surprise pandakavhura maziso mboro yainge yatova halfway ichinyura slowly slowly, somehow ndakabva ndatanga kunzwa kunakirwa ndokubva ndatanga kukoirira. Ndakanakirwa nemboro musi uyu asi paikanyura yese ndakaridza mhere masasi ndakaita kunge ndabaiwa mukati mechibereko chaimo ndokubva ndaizvomora ndikati aiwa chimbomira.
He was very gentle nekuti aida kutowanawo munhu wekupota achisvira ndofunga and inini nekunakirwa kwandainge ndaita I was defibately coming back for more, ndakazosvirwa futi ipapo after tuma minutes ndikangoti it’s a good thing muface wangu was going on a business trip coz I am sure ndikasvirwa husiku hwese nezimboro iri magwana ndinomuka ndisingagone kufamba.
kukura kwemboro yake
Previous articleNyoro neMusoja WeMazizamu paKadoma – Part 1
Next articleNdakaiswa ndakanyatsovhura makumbo apa achiyamwa matits angu!